Dagaalyahanadda Al-shabaab oo si rasmi ah ula wareegay degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalyahanadda Al-shabaab oo si rasmi ah ula wareegay degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool
Wararka naga soo gaaraya degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaalyahanadda Al-shabaab ay si rasmi ah ula wareegeen degmadaas, kadib markii ay halkaasi saakay isaga baxeeen ciidankii hore ugu sugnaa ee Itoobiya.
Al-shabaab ayaa markii ay la wareegeen degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool, waxay islamarkiiba halkaasi kusoo rogeen bandow, waxaana cabsi aad u weyn ay soo wajahday dadka ku nool halkaas.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa maanta lagu dhex arkayaa wadooyinka ku yaala degmada Tiyeeglow, iyadoona dhufeysyo ka sameystay wadooyinka degmadaasi looga soo galo.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay haatan wadaan howglgalo ay dib kula wareegayaan degmada Tiyeeglow islamarkaana ay Al-shabaab uga saaraan.
Ciidamada Itoobiya oo mudooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool ayaa gebi ahaan saakay halkaasi isaga baxay, iyadoona deegaano kale oo ay hore uga baxeen ciidankaasi ay haatan gacanta ku haayaan dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa markii ay la wareegaan goobaha ay hore ugu sugnaayeen ciidamada Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya, waxay goobahaasi ka geystaan tacadiyo isugu jira dil iyo xarig oo ay u geysanayaan shacabka deegaanadaasi ku sugan.